Masatu maka gam akporo na iOS: mepụta capsules foto na oge na ọnọdụ ma lee anya na eziokwu augmented | Akụkọ akụrụngwa
Masatu maka gam akporo na iOS: mepụta capsules foto na oge na ọnọdụ ma lelee n'eziokwu dịwanye elu
Mmanya na-egbu egbu | | android, Apple, software
Ọhụrụ n'ụlọ ahịa google egwuyy Applọ Ahịa iOS App, Masatu bụ netwọkụ mmekọrịta na-atọ ụtọ ma na-atọ ọchị, ịkekọrịta foto dabere na ya, ịkekọrịta ọnọdụ na oge capsules. Enwere ike iji foto na ozi onwe onye juputara na capsule nke emere site na Masatu ma kekọrịta ya n'ihu ọha, na nzuzo, ma ọ bụ naanị na ndị enyi ahọpụtara.
Enwere ike ịmepụta ọtụtụ oge capsules, yana ikike mgbanwe ọdịnaya nke onye ọ bụla nwere ike gbanwee ka ikwe ma ọ bụ gọnahụ onye ọ bụla iji tinye ozi nkeonwe ma ọ bụ foto ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọdịnaya niile dị na capsule nwere ike mepee site na ndị na-ege ntị ahọpụtara naanị oge akọwapụtara. Ozugbo capsule oge mepere emepe, ndị ọrụ nwere ike ịlele ọdịnaya zoro ezo na ndepụta dị mfe, ma ọ bụ nwee ọ momentsụ oge oge site na mmekọrịta mmekọrịta nke eziokwu, ma ọ bụrụhaala na ha nọ na ọnọdụ mgbanwe.
Oge Capsule Ọ bụ otu n'ime njirimara njiri mara Masatu. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọrụ ma ọ bụ usoro ihe omume, ntinye ngwa ngwa foto, kwa. The ngwa na-enye ohere ogbe nhọrọ nke ihe oyiyi, geo-nkpado, na-ele map, zuru ezu log nke gara aga, ugbu a na-eme n'ọdịnihu, na dị iche iche na-elekọta mmadụ media ngwaọrụ na mmadụ nwere ike mkpa ịkọrọ ndị kasị mma oge nke ndụ ha na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ.
Nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ ahụmịhe pụrụ iche nke ịkekọrịta foto nke Masatu site na itinye ngwa ahụ site na iji akaụntụ Facebook gị. Ozugbo ịbanye, a na-egosi gị isi taabụ ise na ihuenyo ụlọ nke ngwa ahụ. Dị ka aha ya na-egosi, Nri nri bụ ebe ihe niile gị na ndị enyi gị na-eme na ụgbụ na-agbakọta n'otu oge n'usoro. Site na ịpị bọtịnụ afụ n'elu aka nri, ị nwere ike ịhụ ọkwa ngosi Masatu gị. Okwesiri ikwuputa ebe a na ngwa a na-akwado nkwanye ntughari maka ihe omume Masatu nile gbasara gi na ndi enyi gi.
Nchọpụta nke taabụ na-enye gị ohere ịchọpụta ọ funụ niile ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ọrụ Masatu ndị ọzọ nke ngwa ndị dị nso kesara ihe oyiyi ha n'ihu ọha. Ọdịnaya dị na taabụ a nwere ike ịga na okwu, ọnọdụ, nlele map ma ọ bụ echiche eziokwu dịwanye elu.
Ọ na-etinye m na ihuenyo ụlọ nke ngwa ahụ yana ndepụta nke ọrụ ya ugbu a na nke gara aga. Ọ bụkwa site na otu ihuenyo ị nwere ike ịgbanwe gaa n'eziokwu dịwanye elu iji chọpụta ọdịnaya nke onwe gị niile, ọ bụrụ ndị nkịtị maka ịkekọrịta foto na mmemme ma ọ bụ capsules oge. Ntughari / melite ọ bụla ịkwesịrị ime maka oge gị (ihe omume) dịkwa ike site na otu ihuenyo ahụ. Ntọala ihuenyo nke ntọala Ntọala bụ maka ịlele ọnụọgụ gị ugbu a na ikere òkè na Masatu, rụọ ọrụ / deactivating ọrụ ịkwanye ọrụ, na ịdenye ngwa ahụ.
Ugbu a kacha mkpa taabụ ha niile: Mepụta. Dịka e kwuru n'elu, oge ọ bụla dabere na nke ịchọrọ ịkekọrịta, ị nwere nhọrọ nke ịkpado ihe dị nso ebe achọrọ yana ya. Enwere ike ịhazi oge ahụ iji kesaa ya n'ihu ọha, na nzuzo, ma ọ bụ naanị ndị enyi ahọrọ. The ngwa-enye gị ohere ịkọrọ a jụụ snap ma ọ bụ mbubata oyiyi ugbu na kichin nke ngwaọrụ gị. With nwere ike itinye obere ederede nkọwa. Ọ bụrụ na nhọrọ ịkekọrịta oge ahụ site na oge capsule, a ga-agwa gị ka ị dee ikike ikike gị. Ozugbo achọrọ nlekọta niile a kpọtụrụ aha n'elu, ihe niile ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ Nchekwa iji kesaa oge na ndị ọrụ achọrọ.
N'ihe banyere oge capsule, a na-enye ndị ọrụ naanị ọnụ ọgụgụ mgbe enwere ike ịmeghe capsule ahụ. A ga-elele onyogho niile dị n'ime oge ekerịta na ihuenyo zuru oke. Na-esote oge nkekọ ọ bụla, ị ga-ahụ ọnụọgụ nke ndị sonyere, foto na nkọwa. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ oge niile nke ndị enyi gị. Nke ahụ abụghị ihe niile, oge ọ bụla nwekwara ike ịkekọrịta ya na ndị so na ya, ndị enyi Facebook gosipụtara, ma ọ bụ na usoro iheomume Facebook. Ọzọkwa, ngwa ahụ na - enyekwa gị ohere ịmepụta ihe omume kalịnda site na oge Masatu.
Ebe ọ bụ na Masatu dị na beta ugbu a, ya mere na ọ bụghị ihe ijuanya na ọ dị maka nbudata, ma na ụlọ ahịa ngwa mkpanaaka dakọtara n'efu. N'okpuru ebe a bụ njikọ njikọta na ngwa gam akporo na ngwa iOS.
Budata Masatu maka gam akporo
Budata Masatu maka iPhone, iPad na iPod
Isi mmalite - Ndụmọdụ Ndị Na-eri Ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Masatu maka gam akporo na iOS: mepụta capsules foto na oge na ọnọdụ ma lelee n'eziokwu dịwanye elu
Ihe nkiri vidiyo iji mepụta eserese eserese pensụl na iPhone / iPad
Oti mkpu na Elekere Ultra, ihe kachasị mma na ngwa mkpuchi zuru oke maka gam akporo